Kulankii ugu weynaa oo laga yeeshay dib u dhac iyo khilaaf hareeyay Xiriirka Shataranjiga Soomaaliya | War La Helaa Talo La Helaa
Home WARARKA MAANTA Kulankii ugu weynaa oo laga yeeshay dib u dhac iyo khilaaf hareeyay...
Kulankii ugu weynaa oo laga yeeshay dib u dhac iyo khilaaf hareeyay Xiriirka Shataranjiga Soomaaliya
Xiriirka Shataranjiga Soomaaliya ayaa magaalada Muqdisho ku yeeshay shirkii ugu ballaarnaa ee looga hadlay caqabado ku hor gudban tan iyo markii la saasay muddo ku dhow 20-sano, waxaana shirkaasi ka soo qeyb galay dhammaanba naadiyada Shataranjiga ee uu xiriirku aqoonsan yahay.
Arrimaha ugu waaweyn ee shirweynaha looga hadlay oo toban qodob ka koobnaa ayaa waxaa ka mid ahaa: horumarka Shataraniga heer goboleed iyo mid caalami ah, in taageero loo helo baahinta Shataranjiga, hirgelinta tartamada ciyaaraha Shataranjiga, in Xiriirku go’aan ka qaato ciyaartoy ku kacday anshax xumo isla markaana warar been abuur ku faafiyay warbaahinta iyo qodobo kale.
Madaxweynaha Xiriirka Shataranjiga Soomaaliya Axmed Xasan Cabdi (Wataac) oo shir guddoominayay kulanka ayaa halkaasi ka jeediyay khudbad ku saabsan marxaladihii kala duwanaa ee uu soo maray xiriirka tan iyo markii xilkaasi loo doortay.
“Xiriirka Shataranjiga waxaa la ii doortay sanadkii 2000, wuxuuna soo maray xaalado kala duwan, hase yeeshee waa inaan iska kaashano sidii looga gudbi lahaa” ayuu yiri Madaxweynaha Xiriirka Shataranjiga Soomaaliya.
Waxa uu sheegay kahor intii aan xilkaan loo dooran in xiriirka lagu ganaaxay muddo saddex sano ah inuusan ka qeyb geli karin shirarka caalamiga ah kaddib amar ka soo baxay xiriirka Shataranjiga adduunka ee FIDE.
Ganaaxa lagu soo rogay Xiriirka Shataranjiga Soomaaliya ayuu sheegay inuu yimid kaddib markii ciyaartoy ka qeyb qaadaneysay ciyaaro caalami ah ay baxsadeen, isagoona sheegay in xiriirku u fariistay shir lagu go’aamiyay in xooga la saaro arrimaha gudaha la iskana daayo arrimaha dibadda.
“Xiriirka Shataranjiga Soomaaliya wixii ka dambeeyay sanadkii 2014-kii wuxuu ka qeyb gelayay shirarka caalmiga ah ee Chess-ka, Doorashooyinka FIDE, mana jirin ciyaartoy ka qeyb galeysay tartamada caalamiga ah” ayuu yiri Axmed Xasan Cabdi Wataac.
Waxa uu sheegay in Xiriirka Shataranjiga uu ka qeyb galay tartamo caalami ah oo ka dhacay dalalka Afrika, Yurub iyo Aasiya, isagoona sheegay in 90% dhaqaalaha ku baxaya ciyaartoyda iyo wafdiga Xiriirka uu isagu taabanayay amaba bixinayay.
“Xiriirka kuma tiirsanaan karo hal qof, waa inuu ku tiirsanaadaa bahda Shataranjiga u sameeyaan taageero si uu u shaqeeyo oo u dhaqan galo” ayuu yiri Madaxweyne Wataac oo sheegay in ujeedada shirweynahaan ay tahay sidii loo horumarin lahaa.
Waxa uu sheegay inuu khilaaf ka dhex jiro guddiga fulinta xiriirka Shataranjiga iyo koox ciyaartoy ah kuwaasi oo ku kacay falal khilaafsan qodobka 62aad ee dastuurka Xiriirka isla markaana wuxuu ka dalbaday xubnaha ka tirsan xiriirka inay go’aan ka qaataan kooxdaasi.
Dhinaca kale dood laga yeeshay khudbadda Madaxweyne Wataac ayaa guddiyada, wakiilada naadiyada ka tirsan Xiriirka Shataranjiga Soomaaliya waxay siyaabo kala duwan uga hadleen ajandayaasha shirweynaha, iyagoona sheegay in arrintaasi kulan gaar ah ka yeelanayo guddiga fulinta iyo Madaxweynaha Xiriirka Shataranjiga.